Trafika sokatra any Soalala : mirehareha ho mahalala manamboninahitra ireo voampanga | NewsMada
Trafika sokatra any Soalala : mirehareha ho mahalala manamboninahitra ireo voampanga
Misy ny fiaraha-miasan’ny fikambanana miaro ny tontolo iainana sy ny fanjakana any ifotony. Anisan’izany ny any Soalala Mahajanga, ao amin’ny helodranon’i Baly, hany ahitana ny karazan-tsokatra angonoka.
Nilaza ny talen’ny Madagascar national park (MNP) any amin’ny helodranon’i Baly, Soalala, faritra Boeny, Andrianjara Hervé Amavatra, fa nahitam-bokany ny fiaraha-miasa teo aminy sy ny fikambanana iraisam-pirenena Durrell wildelife, ny Madagascar national park, ny Alliance voahary gasy (AVG), iadiana amin’ny trafika sokatra. Any amin’ity toerana ity ihany ahitana no tena ahitana ny karazany angonoka. Olona enina ny voasambotry ny mpitandro filaminana, nahatrarana sokatra telo ny 17 janoary teo. Nisy roa hafa koa tratra tany an-toerana, ny 27 desambra 2016.
Nirongatra ny fitsofohana tanaty ala, talohan’ny desambra 2015 ary nanomboka ny febroary 2016 ny hetsika iadiana aminy. Niisa 53 ny fitsofohana tsy ara-dalàna ny enimbolana voalohany 2016, ary nihena sivy ny enimbolana faharoa. Tratra ny mey 2016 i Dedesy, hiakatra fitsarana anio 26 janoary, anisan’ny atidoha amin’ity fanaovana trafika sokatra ity. Ho an’ireo tratra ny desambra sy janoary teo, fantatra fa mirehareha ho mahafantatra manamboninahitra ambony ireo voampanga tratra. “Antenaina fa tena hampihatra ny lalàna sy ho sazy azo tsapain-tanana ny havoakan’ny fitsarana”, hoy Razakarivony Joely avy amin’ny AVG. Fampidirana am-ponja 5-21 taona ny sazin’ny voaheloka miampy fandoavana onitra 100-200 tapitrisa Ar. Nilaza Randriamanampisoa Hasina ao amin’ny Durrell, fa vidin’ireo mpanao trafika 2.500-5.000 dolara ny sokatra iray eto amintsika, ary amidiny 25.000-50.000 dolara any Azia, toa an’i Malezia, Hong Kong, Sina, Tailandy.